हिमानी र ज्ञानेन्द्र एकसाथ ‘नाइट क्लब’ गएको त्यो रात, त्यसपछि…. – Gazabkonews
हिमानी र ज्ञानेन्द्र एकसाथ ‘नाइट क्लब’ गएको त्यो रात, त्यसपछि….
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह ठमेलको नाइट क्ल’बमा गएर नाचेको फोटो र भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि केही वर्ष धार्मिक का’र्यबाहेक अ’न्यत्र सहभागी नहुने गरेका पूर्वराजपरिवारका स’दस्यहरु पछिल्ला वर्षबाट नाइट क्ल’बमा गएर युवाहरुसँग नाचगान गर्दै रमाइलो गर्न थालेका छन् ।गत शनिबार राति ठमेलको नाइट क्ल’ब ‘ लर्ड अफ ड्रिं’क्स’मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वयुवराज्ञी हिमानीसहित पूर्वराजपरिवारका स’दस्यहरु कलाकार तथा युवाहरुसँग गीत गाउँदै नाचेका हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी उक्त नाइट क्ल’बमा नाचेको फोटो भिडियो भाइरल बनेको हो । यसअघि उनीहरु दरबारमार्ग र लाजिम्पाटमा रहेको त्रिसरा क्लबमा जाने गरेका थिए । त्यहाँ पनि उनीहरु नाचगान गर्ने गरेका थिए ।क्लब पुग्ने उनीहरुलाई युवाहरुले भरपूर साथ दिएको देखिन्छ। पूर्वराजपरिवारका सदस्यसँग लिइएका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै ‘जनताका राजा’जस्ता शब्द लेखेका हुन्छन् । राजनीतिप्रति च’रम अ’सन्तुष्टि बढिरहेका बेला पूर्वराजपरिवारका सदस्य युवाहरुमाझ पुग्ने गरेका छन् र उनीहरुको मन जि’त्ने प्र’यास गर्छन् ।